Kooxda Inter Milan oo doonaysa inay heshiiska Icardi uga faa’iideysato sidii ay Real Madrid uga heli lahayd Weeraryahanka… – Gool FM
(Milano) 02 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa la soo sheegayaa inay doonayso inay heshiiska uu Icardi ku aadayo Real Madrid uga faa’iideysato sidii ay ku heli lahayd Weeraryahan Benzema.
Kooxda reer Talyaani waxa ay diyaar u tahay inay heshiiska Weeraryahanka reer Argetina ay uga faa’iideysato sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd dhaliyaha reer France ee Karim Benzema.
Warsidaha Don Balon ayaa warinaya in Inter Milan ay eegeyso inay soo qaadato Karim Benzema iyadoo qeyb uga dhigaysa heshiis kasta oo ay Mauro Icardi ugu dirayaan kooxda Real Madrid.
Kooxda Talyaaniga ayaa diyaar u ah inay iska iibiso Weeraryahanka reer Argentine ee Icardi kaddib markii uu qilaaf soo kala dhex galay isaga iyo maamulka naadiga, waxaana ay u muuqataa inuu ka tagayo kooxda.
Yeelkeede, kooxda Inter Milan ayaa dib ugu yeertay weeraryahankeeda Mauro Icardi kulanka ay berri la ciyaari doonaan naadiga Genoa.
Inter Milan ayaana doonaysa haddiiba ay luminayso Icardi inay heshiiska uu ku aadayo Los Blancos uga faa’iideysato sidii ay ku heli lahayd laacibka reer France, laakiin macallinka Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaan doonaynin inuu Benzema kooxda ka baxo kaddib markii uu weeraryahankan sameeyey bandhig cajiib ah xilli ciyaareedkan.
Sidee ayey u muuqanaysaa SHAXDA ay garoonka ku soo geli doonto kooxda Manchester United kulanka caawa??